Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoRevolution;Nutoo akkasitti Jirraa Mee Wayyaaneen Maalitti Jirti?
#OromoRevolution;Nutoo akkasitti Jirraa Mee Wayyaaneen Maalitti Jirti?
(Abdi Fite Irraa)
Waan isin itti aansitanii dubbiftan kun qabatamaatti namoota Hojii kana keessaa harka qabantu barreesse. Kunis uummati dursee akka of eeggannoo taasisuuf yaadameetu. Akkuma Tibba kana OTV/EBC irraa Daawattan Obbo Lammaa Magarsaa Dargaggooti qawwee fudhatanii gara daggalaa deeman akka nagaan deebi’anii uummatatti makaman bifa uummatichaaf quuqaman fakkaatuun dubbachuu isaanii ni yaadattu. Karoorri isaan Hojirra oolchuuf jiran ammoo Faallaa Sanaati.
Kaayyoo isaan itti jiran Shira hameenyaa kan gara Jabinaan guute ummata irratti dalaguun waan waraanni ABO ummata irraan dhaqabsiise fakkeessanii Dhiheesuuf, akkasumas dugugiinsa sanyii maqaa ABO xureessuuf Baddannoo irratti godhameen kan wal fakkaatu sagantaa addaa qopheeffatanii hojiitti seenanii jiru. Bakkeewwan Isaan Irratti kana raawachuuf yaadanis bakkeewwan A.B.O keessa sosso’a jedhanii amanan keesatti.
Akkamin Hojirra oolchu?
Somaalotaa fi akkasumas saboota biroo quuqama uummatichaa hinqabne garuu afaan Oromoo sirritti danda'an baayyinaan 1830 ta'an naannoo Somalee aanaa Godee keessatti ajajoota waraanaa gosaan Tigiree ta'an sadii itti ramadee leenjiitti erga bobbaasee booda ji'a sadiif leenjisee amma gara xumuraatti jiru.
Jarreen Kanas nama afurtamii shan shaniin(45) qoodee marsaa jalqabaa Oromiyaa Bahaa fi Oromiyaa dhihaattii bobbaasee jira. Uffata WBO kan riphee lolaa isaan fakkeessu uffatanii alaabaa ABO qabachuun ummatatti dhiyaatu.
Kaayyoon isaanii Maali?
1 - WBO fakkaatanii dargaggoota ofitti waamuun adamsanii qabuu dha.
2 - Bakka tokko tokkotti ummata, keesumaa ammoo alagaa Oromiyaa keesa jiraatan irratti fuullefatanii haleellaa dhaqabsiisuun A.B.O tu akkas isin godhe jechuun olola oofuu, Sobanii Namoota Kana Meeshaa walin qabanii Miidiyaa irratti dhiheessuu dha.
Bakkeewwan amma Isaan kun bobbaa itti eegalan keessaa anooleen afur baramanii jiru.
Keesumaa Jiraattoa Aanaalee kanneen keessa jiraattanif: Nama itti siqxan dursa sirritti adda baafadhaatii beekaa. Nama Hidhata keesaniin ala ta’etti hin siqinaa! Yoo rakkoon tokko uumame bifa qaamni sadaffaan beekuu hin dandeenyeen akka itti walif galatan uummadhaa!! Hunda caalaa Sababaa namni Sabboonaa fakkaatee Isinitti dhihaate qofaaf itti hin dhihaatinaa!
Posted by Hasan Ismail at 8:18 AM